Kitapo fitaterana casserole extensible China Polyester miaraka amina orinasa mpanamboatra lamaody | Picvalue
Kitapo mitondra casserole polyester extensible miaraka amin'ny fanontana lamaody
Kitapo mangatsiaka mitondra casserole ity dia entana mahazatra indrindra indrindra eo amin'ny tsenan'i Etazonia. Isan-taona dia amidinay any Etazonia ny maro amin'ireo harona ireo. Manolora sakafo mafana ary tazomy ho mafana na mangatsiaka mandritra ny ora maro ny famoronana casserole anao. Mora soloina madio. Ny kitapo casserole tsirairay dia misy komparty lehibe lehibe eo amin'ny farany ambany sy efi-trano ambony azo avoaka. Mora entina am-paosy sy paosy zippered ivelany ahafahana mitazona fitaovana enti-miasa na servisy, sns. Ny fitaovana ivelany dia polyester 300D / 600D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny firakofana ny kitapo dia mety ho PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando.
Matetika izahay dia mampiasa sombin-kazo EPE 4mm matevina eo anelanelan'ny ivelany sy ny lamba fisakafoanana mba hafana na hatsiaka. Mazava ho azy fa afaka mampiasa iray matevina kokoa ianao.
Isan-taona dia manome entana sy lamina vaovao 50-100 ho an'ny mpanjifa eran-tany izahay. Tongasoa namboarina ihany koa. Manana efitrano fakan-tahaka matanjaka be izahay. Alefaso amiko ny kantoo, hiverina aminao ny santionany.
Item No. .: ML20014
Size: 42 * 27 * 12.5 / 21.5cm
Description: Kitapo mangatsiaka kokoa an'ny Casserole mitondra tontonana fanamainana
Antsipirian'ny vokatra: Cesterika polyester miaraka amin'ny valin'ny PEVA / Aluminium foil. Ny fitaovana dia handalo fitsapana REACH sy Ca 65. Ny lining dia ho fenitry ny fifandraisana amin'ny sakafo.
asa: Ataovy mangatsiaka na mafana mandritra ny 3-4 ora ny sakafo na zava-pisotro. Mety amin'ny ivelany na lakozia.
Port: FOB Xiamen, Sina
Pattern: Afaka misafidy amin'ny tranokalako na volavola namboarina ianao
Famantarana: OK ny sary famantarana namboarina
MOQ: 2000pcs isaky ny loko
Fe-potoana 40 andro aorian'ny nanamafisana ny kaomandy
Previous: Kitapo mitondra casserole avo roa heny miaraka am-paosy harato
Manaraka: Kitapo mitondra casserole polyester extensible cationic polyester miaraka amin'ny tontonana fanamainana
Kitapo mitondra casserole avo roa heny
Polyester lamba casserole kitapo mitondra amin'ny dou ...
Kitapo mangatsiaka mitondra casserole polyester lamba
Kitapo mitondra cassicole polyester cationic amin'ny h ...
Cationic polyester extensible casserole mitondra ...
Kitapo mitondra casserole avo roa heny miaraka am-paosy harato